Ihe kachasị ewu ewu nke ndị na-agụ akwụkwọ (nkọwa na foto nke osisi) - Ornamental osisi na-eto eto - 2019
Ụdị ndị a na-ahụkarị maka ndị na-agụ akwụkwọ
Akwukwo oku - osisi dị ala na-adaghị adaba bụ nke dị oké ọnụ maka ọdịdị mma ya. Akwukwo nke osisi a na-acha na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie n'oge mgbụsị akwụkwọ. A na-eji osisi swiva eme ihe n'ụzọ dị iche iche, na-enwe ya na ngwugwu dị iche iche.
Cotoneaster onwunwu (Cotoneaster lucidus)
Cotoneaster kehoraizin (Cotoneaster horizontalis)
Gọọmenti Cotoneaster Dammer (Cotoneaster dammeri)
Ndị na-anụ ọkụkọ na-edozi (Cotoneaster adpressus)
Cotoneaster ọtụtụ-flowered (Gọọmenti multiflorus)
Akwukwo ndi ozo (Cotoneaster melanocarpus)
Cotoneaster nkịtị (Cotoneaster integerrimus)
Ndị nkịtị na-agụ akwụkwọ kesara site na Baltic na North Caucasus, na ọnọdụ ndị ọ na-etolite n'ugwu ugwu, aja na limestone-ala bara ọgaranya. Na omenala ugbo - onye nlere anya.
Ụlọ elu ụlọ ahụ ruru mita 2 n'ogologo, alaka ndị na-eto eto na-emepụta akwụkwọ, ma mgbe ahụ, ka ha tozuru okè, ha na-agba ọtọ. Ohia nwere okpueze okpueze gbara okpukpu. Akwụkwọ dị iche iche, dịka àkwá, ogologo nke epupụta dị ihe dịka 5 cm.
N'èzí nke efere akwukwo bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ, nke na-egbukepụ egbukepụ, na akụkụ dị n'ime ya bụ isi awọ na ike. A na-achịkọta okooko osisi pink-acha odo odo na agbụrụ. N'oge mgbụsị akwụkwọ, nnukwu mkpụrụ osisi ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara chara acha. Nke a dịgasị iche iche na-eguzogide ọgwụ na ọkọchị.
Ala nna na-egbuke egbuke - Eastern Siberia. Nke a ziri ezi nke osisi shrub, nke kpuchiri ya na osisi lush. Onye na-akwọ ụgbọ ala na-eto ruo mita 3 n'ịdị elu. Alaka ndị na-eto eto nke ụcha-acha aja aja na nsọtụ, maka oyi, ndị ị ga-acha ọbara ọbara-agba aja aja na agba, mgbe ọgbọ, alaka na-ekpochapụ lint.
Okpueze nke na-eto eto bushes ọkọride ubé elongated, na-eto eto, na-ewe a gburugburu udi. Onye na-ekpuchi ọkụ na-egbuke egbuke, nke na-agbapụta osisi, okpukpu nke okpueze nke osisi toro eto dị ruo mita 3. Ogologo akwụkwọ ahụ dị site na 2-6 cm, obosara - 1-4 cm.
Ihe odide nke ellipse nke oge na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'oge okpomọkụ na-acha odo odo, ma na-ewere ya na-acha ọbara ọbara n'oge oyi. Ọkụ na-amalite na May, ọ dị ihe dị ka otu ọnwa.
Osisi malitere ịmị mkpụrụ na afọ 4. Ọ mara mma, nke na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo. Ọtụtụ mgbe, a na-eji shrub eji osisi ma ọ bụ ala. Kizilnik mara mma ma mara ya kemgbe mmalite nke narị afọ XIX.
Osisi a bụ nke ndị na-akwagharị ahịhịa. Ogologo osisi dị ogologo ruo mita n'ịdị elu, okpueze ya dị elu ruo mita 2 n'obosara. Ebe nke alaka ya siri ike yiri ikpo azụ.
Akwụkwọ nke osisi shrub dị gburugburu, na-egbuke egbuke, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọkọchị, na-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara site na mgbụsị akwụkwọ. Osimiri na-amalite na May, obere okooko ọcha na pink na-atọ ụtọ anya maka ụbọchị 22. Bright-acha ọbara ọbara mkpụrụ ripening ke September nọgide na alaka ruo mgbe mmiri.
Ọ dị mkpa! Ụdị ihe a na-agụnye ihe gbasara ala mejupụtara.
A na-eji ụdị abụọ eme ihe na kọntaktị dị na mbara igwe:
Variegatus - obere shrub ruo 30 cm, na okpueze nke na-eto eto ruo mita 1.5 n'obosara. Na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ohia na nsọtụ bụ nke na-acha ọcha;
Nkọwapụ - Osisi dwarf (ihe ruru 20 cm), ka okpueze na-etolite, ọ na-etolite na mita. Obere osisi shrub na-agba na June na okooko osisi pink. Na njedebe nke okpomọkụ Perpusillis na-acha na-acha uhie uhie. Green epupụta ke ndaeyo, ada burgundy ke mgbụsị akwụkwọ.
Onye na-akwụ ụgwọ na Dammer dị ka nke gara aga, anya ntanetị. N'okpuru ọnọdụ okike, ọ na-eto n'ugwu ugwu nke China. Nke a na shrub nwere alaka na-agbasa n'ala, nke na-enye ya ohere iji nwayọọ nwayọọ na-amụba.
Osisi Ome ahụ n'otu ụgbọelu ahụ na-eto na dayameta, ọ bụghị ịrị elu karịa 30 cm. Epempe akwụkwọ nri nke Dammer nwere oke na obere, ọdịdị nke epupụta bụ ellipsoidal. N'oge ọdịda, dị ka ọtụtụ ndị na-egbu egbu, osisi ahụ gbanwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie.
Blooms uhie inflorescences, ekemende mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi coral-acha. Mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ijigide alaka ruo ogologo oge. Ụdị a abụwo ewu ewu kemgbe afọ 1900. Ụdị kachasị ewu ewu:
Eicholh - elu 60 cm n'ogo, ya na mkpụrụ osisi ọbara ọbara-acha ọbara ọbara;
Mma Coral - ruo 40 cm, na-acha ọbara ọbara, nnukwu, ma otu;
Stockholm - ogologo, ruo ogologo mita, ohia na-acha uhie uhie.
Nke a bụ ihe na-eto eto na-eto eto na ọkara mita. Na dayameta nke okpueze ya - mita. Alaka ya dị ka a ga-agbasapụ n'ala, okpueze ahụ na-agbanye n'ala. Akwukwo akwukwo a bu obere, nke gbara ya gburugburu, uhie na-acha uhie uhie. Ụdị nke ngwa ngwa na-eto eto, uto dị elu ruru n'ime afọ 10.
Ị ma? Na ọgwụ ndị Tibet, mkpụrụ osisi, ogbugbo na epupụta nke ndị na-elekọta ụlọ na-ejikarị eme ihe maka ọgwụgwọ. Decoctions na infusions site na akụkụ dị iche iche nke osisi na-emeso anụ ahụ ike, nsogbu nhụjuanya na nsogbu nke usoro digestive.
Ebe omumu nke ndi mmadu bu ndi ozo bu Caucasus, Central Eshia, ebe odida anyanwu China na Western Siberia. Osisi dị elu, na-eto ruo mita 3 n'ịdị elu. O nwere mpempe akwụkwọ dị mkpa. Ogologo sara mbara dị ka ọdịdị nke mgbanwe agbaghari ellipse n'oge ụfọdụ: n'oge ọkọchị, ha na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ, na n'oge mgbụsị akwụkwọ, ha na-acha odo odo.
Mkpụrụ osisi dị obere, na-acha ọcha, shrub n'oge okooko yiri ka ọ ga-ekpuchi snow. Mkpụrụ ndị buru ibu, gbaa gburugburu, na-acha ọbara ọbara agba. Osisi ahụ hụrụ ebe ndị a na-agbanye ọkụ, ebe ọ bụ na obere ụdị nke ụdị a na-echebe ya. Na Europe, a na-etolite omenala na osisi ndị na-akụ ndụ.
Ntị! N'agbanyeghi ntughari ntu oyi, mkpuru osisi maka oyi ga-echekwa ntu oyi.
Akwukwo ndi mmadu na-edozi na-aga nke ọma n'etiti etiti. Ọ bụ nnọọ oyi-hardy, ndụ na gburugburu ebe obibi na Caucasus, ke edem edere China, ke Europe ye Central Asia. Osisi dị elu ruru 2 mita, alaka na agba aja aja na-acha uhie uhie.
Doo n'ụdị àkwá ruo 5 cm n'ogologo. Akụkụ nke elu nke mpempe akwụkwọ ahụ jupụtara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, akụkụ nke ala dị ọcha. Calyx inflorescences na okooko osisi pink, na-eto na May, ruo ụbọchị iri abụọ na ise. Ọdịbendị a nwere oriri mkpụrụ osisi. Ha na-azụlite agycane ojii na 1829.
Mmasị A na-eji ngwá ọrụ ndị e ji achọ mma na osisi nke mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi: ihe ncheta, ọkpọ maka ịkụ anwụrụ, nnukwu ihe egwu a pịrị apị.
Gbara akwụkwọ na-edozi ọkụ bụ ndị a na-ahụkarị n'India, Iran na Pakistan. Ala, ruo otu mita na ọkara, shrub. Mkpịsị uhie na-acha ọbara ọbara na Ome na-eto eto nwere oke, mgbe ha tozuru okè - ha gba ọtọ.
Dooo na ellipse ruo 6 cm n'ogologo ma ruo 4 cm n'obosara. Akụkụ elu nke efere ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ala bụ isi awọ-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Okooko osisi pink, obere ma nakọtara na nnukwu inflorescences. Na-ewe oge dịka ọnwa, na-amalite oge ntoju na June. Ọkụ na mkpụrụ osisi amalite mgbe ọ dị afọ asatọ.
Mkpụrụ dị obere ma gbaa gburugburu, na-acha uhie uhie, ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na mkpụrụ nwere 2-3 mkpụrụ. Mkpụrụ ahụ chara n'onwe ya na October ma nọgide na shrub ruo oyi oyi.
N'ọhịa ahụ a na-eji edozi ha, ha na-eji ọtụtụ ndị na-agụnye ụlọ, ndị kasị ewu ewu na ha bụ:
"Dwarf"- ụdị ihe ndị dị n'ala na-emepụta n'ogige nkume, n'elu ugwu ugwu;
Ogba ogba ocha "Schneider"- osisi shrub na-agagharị, ọ bụghị ihe karịrị 20 cm n'ogologo, maka ezigbo mgbidi na ogige nkume.
Akwukwo oku "Alaunsky"- ụdị osisi ndị na - adịghị ahụkebe edepụtara na Red Book. Tall - ruo mita abụọ ohia na - acha uhie uhie nke na - aghọ oji na njedebe nke ịmalite.
Ọ dịghị ihe na-adọrọ mmasị dị iche iche: olfactory, obere-leaved, otu-flowered, Henry, bubbly, Franche, krastsvetny.
A na-anọchite anya ndị na-edozi ụlọ, dịka ị pụrụ ịhụ, site na iche iche iche. Osisi ndia nile di nma n'omume ha ma kwesiri igbado ebe obula.
Ụdị tomato dị iche iche ọhụrụ na-eri nri Ihe nzuzo nke nne nne: nkọwa dịgasị iche, foto, àgwà
Gịnị ma ọ bụrụ na beets anaghị pulite
Pod ma ọ bụ pụta? Nke a dị omimi kabeeji mfri
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ụdị ndị a na-ahụkarị maka ndị na-agụ akwụkwọ